Howlgalada ka dhanka ah Alshabaab oo ka dhacay Waqooyi magaalada Kismaayo – Radio Muqdisho
Howlgalada ka dhanka ah Alshabaab oo ka dhacay Waqooyi magaalada Kismaayo
Kadib howlgal ballaaran oo lagu qaarijiyay maleeshiyaad iyo horjoogayaal badan oo ka tirsanaa koxda Alshabaab oo ka dhacay deegaanada Waqooyi ee magaalada Kismaayo ayaa waxaa halkaasi tagay madaxweynaah Jubbaland Axmed Madoobe.
Ujeedka socdaalkiisi oo uu ahaa ukuurgalka xaaladda deegaanadaasi ayuu madaxweynaaha wuxuu warbixino ka dhageystay saraakiisha hoggaaminaysa howlgalka lagula dagaalamaya maleeshiyada Alshabaab.
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland ee Soomaaliya Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa siweyn ugu ammaanay ciidanka Xooga Dalka Soomaaliyeed iyo kuwa Jubbaland sida ay u dhabar jebiyeen dhagarta koxda Shabaab,wuxuuna intaasi ku daray in ay sii socondoonaan howlgalada ka dhanka Ah Alshabaab.
Madaxweynahu waxaa uu tagay dhamaan deegaanadii ugu danbeeyay ee Al-shabaab laga saaray isagoo Ciidamada ku booriyay in ay u dhabar adaygaan halganka ay wadanka ku xoraynayaan,wuxuuna intaasi sii raaciyay in dhuldambe oo laga qabtay Alshabaab aan dib ugu soo laaban doonin.
Wuxuu ugu baaqay shacabka kunool deegaanada Jubbaland in ay ciidamadu kala shaqeeyaan sidii loo sugi lahaa nabadgeliyada deegaanadaasi,iyagana laga dulqaado dhibaatooyinka ay ku qabaan kooxaha argagixisada ah ee Alshabaab.
Booqashada madaxweynaha Jubbaland ayaa ku soo beegmaysa kadib dagaal deegaanka Baarsanguuni uu ku dhexmaray Ciidanka Qaranka iyo Maleeshiyada Shabaab,dagaalkaasi oo jab xoogan lagu gaarsiiyay Alshabaab
Dab ka kacay Bakhaarka wayn oo lagu kaydiiyo Waraaqaha codeynta doorashada Ciraaq
Dugsiga hoose dhexe ee Kista oo kaalinta koobaad ka galay tartan dalka swedan lagu qabtay